गीत मेरिना Tsvetaeva को मातृभूमि समर्पित, देश को लागि एक गहिरो र केहि निराशाजनक प्रेम imbued छ। लागि कवि उनको हृदयमा सधैं छ रूसी (विशेष गरी जीवन्त को प्रवास अवधिको काम मा देखेको छ)। आकर्षित को कविता विश्लेषण Tsvetaeva गरेको "मातृभूमि" र therein लेखक को मुख्य विचारहरू पहिल्याउन।
Tsvetaeva गरेको कविता विश्लेषण यो समयमा, निर्वासनमा लेखिएको जब त्यो निरन्तर आफ्नो पैतृक भूमि लागि तिर्सना द्वारा सास्ती थियो भन्ने तथ्यलाई सुरु हुनु पर्छ। हामी कवि रूसी भूमि remoteness द्वारा तर्साउने छ हेर्नुहोस्। तेस्रो stanza मा लेखक "जन्मबाट प्राप्त dalyu" जहाँ र चाहना बिना अवस्थित हुनेछ भनेर emphasizing संलग्न घर भनिएको छ। Tsvetaeva सबैतिर तपाईंले संग घर "वहन" भन्दै, सम्बन्ध कल "घातक", यो छवि reinforces। त्यो स्वीकार र कुन तयार कहिल्यै छोड्न जो पार रूपमा कवि लागि रूस प्यार।
Tsvetaeva आफ्नो मूल भूमि, तर पनि रूसी मान्छे संग मात्र होइन नै बांध। पहिलो stanza मा त्यो तिनीहरूले एक साधारण भावना साझेदारी कि चिनन, एक साधारण मानिसलाई आफु तुलना। यो पद विश्लेषण भने हुनुपर्छ। उहाँले आफ्नो पैतृक देश प्रेम भरिएको छ रूपमा Tsvetaeva, रूसी मान्छे नजिक।
कविता Tsvetaeva को विश्लेषण कवि उनको इच्छा विरुद्ध घर ड्र भन्ने तथ्यलाई उल्लेख बिना गर्न सक्नुहुन्न। चौथो stanza मा, रूस ( "दल" भनिएको) गेय हेरोइन कल, यो संग "हटाउँदछ" "रक स्टार।" त्यो जहाँ भाग्यो, मातृभूमि प्रेम सधैं यो फर्कन हुनेछ।
तर हामी अझै पनि घरमा कि melancholy गेय देखेर भने - यो इच्छा छ यसको भाग्य को, पछिल्लो stanza यसको ठाउँमा सबै राख्छ। यो एक विशेष भूमिका खेल्छ र दायित्व कविता Tsvetaeva को विश्लेषण समावेश गर्न। यो, हामी गेय हेरोइन आफ्नो मातृभूमि गर्व र पनि आफ्नै मृत्युको लागत मा यो गाउन तयार छ भनेर ( "ओठ / ब्लक मा सदस्यता")।
टाढा देश प्रेम को विरोधाभासी भावना वर्णन गर्न, Tsvetaeva oxymorons प्रयोग गर्दछ: मलाई bliz "र शब्द को धेरै पुनरावृत्तिकोसङ्ख्या" रूसी संकेत गर्न प्रयोग दूरी "अलग्याउने," विदेशी भूमि, मेरो मातृभूमि, "" दूरी, अरूको देशमा। गेय हेरोइन यसलाई कसरी धेरै मनपर्ने ठाउँ बाट यो अलग को सोचाइले पिरोलिएका थियो, पीडित। पछिल्लो रेखा हामी संवाद र यसको मातृभूमि को पनि एक प्रकारको हेर्नुहोस्। र हेरोइन एक नक्कली केवल एक बताएर प्रतिनिधित्व छ "तपाईं!", रूसी संबोधित। त्यो छोटो, तर capacious "मेरो मातृभूमि" को लागि बाहेक, आफ्नो प्रेम व्यक्त गर्न अर्को शब्दमा फेला गर्दैन। यो वाक्यांश मा, कविता भर बारम्बार, हामी मातृभूमि एक जस्तो देखिने सरल तर गहिरो मनोवृत्ति Tsvetaeva देख्न सक्छौं।
यो तपाईं हाम्रो विश्लेषण पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। एक निराशाजनक तिर्सना गेय मन्त्र रूसी भूमि संग प्राण भरिन्छ भन्ने मातृभूमि, गहिरो र पीडादायी प्रेमको पूर्ण गर्न Tsvetaeva गरेको कविता समर्पित। दुर्भाग्यवश, र कवि को भाग्य उनको आफ्नो जीवनकालमा रूस मा पहिचान पाउन अनुमति थिएन। तर अब उनको गीत विश्लेषण र मूल भूमि लागि उनको प्रेमको गहिराई र दुःखद घटना सराहना गर्न सकिन्छ।
सारांश र मुख्य वर्ण: "एक प्रागैतिहासिक केटा को साहसिक"
छवि Bunin मा वास्तविक र काल्पनिक मान। Bunin को मुख्य विषय
Edvard Lir: को निरर्थक को कविता
"मैन आंकडा", को "proscenium" इतिहास को एक सारांश "
"किया रियो" वा "स्कोडा र्यापिड": कि राम्रो छ र के चयन गर्न?
पछिल्लो रूपमा घर पेस्तोल, तर unconvincing तर्क
मिखाइल पोरेचिनकोव: फिल्मोग्राफी, जीवनी र अभिनेताको परिवार
रूसी Balalaika Alexey Arkhipovsky: रचनात्मकता, जीवनी
गर्भवती महिलाका लागि प्रार्थना बच्चाको विकास सकारात्मक प्रभाव छ